PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-23 - Mazithele izithelo izinkulisa zebhola zakuleli
Mazithele izithelo izinkulisa zebhola zakuleli
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-23 - IMIBONO - NHLANHLA SITHOLE
UKUPHELELA endleleni kwabadlali abasuke bekhuliswe ezinkulisa zamaqembu adlala kwiPremier Soccer League (PSL) ngenxa yokuhluleka ukubhekana nezinselelo ezihambisana nodumo, kuyinkomba esobala yokuthi amaqembu analezi zikhungo kusafanele asebenze ngokukhulu ukuzikhandla uma efuna ukubona izithelo zemizamo yawo.
Kunesimo esishayisa ngovalo eNingizimu Afrika sokuthi amaqembu ayazama ukuba nezinkulisa kodwa kuncane okuba yinzuzo ewabuyelayo ngokutshala kwawo izimali ezishisiwe kuzona, uma uqhathanisa nawase-Europe.
Mhlawumbe ambalwa uma ekhona angaphumela eshashalazini athi ayazibona izithelo zokutshala kwawo izimali ezinkulisa. Mhlawumbe iLamontville Golden Arrows kuphela engakusho lokhu.
Isihlava esikhulu esihlasela abadlali abaphuma kulezi zinkulisa ukudlebeleka kwabadlali abasuke bekhulele kuzona uma sebenyuselwe esigabeni esikhulu.
Umdlali udlala kahle ngemidlalo yakhe yokuqala yesigaba sesizini asuke ekhushulwe ngayo. Umonakalo uqala ngesikhathi eseqala ukuthi kubhalwe ngaye emaphephandabeni kukhulunywe ngaye nase misakazweni.
Okulandela lapho uzombona umqeqeshi esembeka ebhentshini ngemuva, umthole esehlezi nezihlwelwe. Mawulandelela ukuthi ngabe yini imbangela yalokho, uthole ukuthi abaqeqeshi sebekhathele ukukhuluma naye ngoba useyadlebeleka engasabambeki.
UMandla Ncikazi oyiphini lomqeqeshi kwiArrows, uthi babhekene nengwadla yokuqala phansi laba badlali ngokuthi babafundise ngendlela yokuziphatha uma udlala kulesi sigaba.
“Inkinga enkulu wukuthi izinkulisa zamaqembu ethu aziphelele kunokushodayo uma uqhathanisa nezase-Europe. Abadlali badinga ukufundiswa besenkulisa ngokuthi umdlali uziphatha kanjani,” kubeka uNcikazi.
Uthi kunabadlali abahlonishwayo emhlabeni abadlula ezinkulisa kodwa udumo aluzange lubenze bavuvukalelwe amakhanda.
“Ngingabala uLionel Messi, Christiano Ronaldo noDavid Beckham, bonke laba abazange bakhohlwe bangayihloniphi into ebafunzayo.
“Lapha umdlali uthi angathenga imoto aqale akhohlwe yizinto ezimenze wafinyelela kuleli zinga asuke esekulona. UMessi noRonaldo noBeckham (esadlala), abakhohliwe ukwenza izinto ezabenza baduma umhlaba wonke. Ama-freekick abagcini ngokuwashaya ejimini kuphela kodwa babuye bazenzele ngesikhathi sabo,” kukhala uNcikazi.
Uqhuba uthi eNinigzimu Afrika umdlali obejima yedwa ngaphambi kokuthi azozilolonga neqembu akasakwenzi lokho ngoba usedumile usehamba ngemoto akasasiboni isidingo salokho.
“Umphakathi nawo kufanele ukhonjwe ngenjumbane ekubhebhethekiseni ukungaziphathi kahle kwabadlali. Uthola umdlali bembungaza ngokumthengela utshwala okuyinto esiqeda nya isimilo sakhe,” kusho uNcikazi.
Uphinde wazwakalisa umuzwa wakhe wokuthi amaqembu kuzofana nokuthi achithe izimali, futhi awakazokuyibona inzuzo uma engenayo umkhakha wokufundisa ngokuziphatha kwabadlali besephansi enkulisa.
“Akuwona umsebenzi wabaqeqeshi beqembu elikhulu ukuqala phansi bacangcathe izimilo nendlela yokuziphatha kumdlali obekuthiwa ubesenkulisa. Ngakho abantu abasebenze ngalo mkhakha bayadingeka ekutheni benze lo msebenzi,” kusho uNcikazi.
UNcikazi uqhuba uthi wonke umuntu othintekayo kunobhutshuzwayo kufanele afake igxalaba kuhlanganisa nezinkakha zebhola ezadlala kudala.
“Inkinga esibhekene nayo wukuthi amaqembu ethu awabanakile abadlali abadala. Emaqenjini aphesheya abadlali abadala bayanakekelwa ngoba kuyaziwa iqhaza labo abalibambayo uma sekukhona okungahambi kahle.
Emdlalweni weLiverpool noma weManchester United endaweni yomntakabani, kusuke kugcwele izinkakha zalawa maqembu.
Lapha kithi ubona osombusazwe okuthi iqembu uma lisenkingeni ngabadlali bangazi nokuthi lidumephi.”
Uphetha isiqebetho ngokuthi izinkakha ziyakwazi ukungenelela uma zibona kukhona okungahambi kahle eqenjini noma sekukhona umdlali osedunyelwa yikhanda.
UBongani Yengwa, ongomunye wabaqeqeshi osebenze isikhathi eside emazingeni aphansi, uthi uhlelo olwaqalwa yisigaba seMDC (Multichoice Diski Challenge) beluzothela izithelo ngokuhamba kwesikhathi.
Abadlali babefundiswa ukuthi umdlali uma esesigabeni esikhulu uziphatha kanjani, uyilondoloza kanjani imali nobumqoka bokwenza lokho nokuthi abazindaba ubasingatha kanjani.
“Kuyisimo esejwayelekile ekutheni umuntu uma kade engenayo imali bese kuthi ngokuphazima kweso azithole esenezinkulungwane ezingena kwi-account yakhe yasebhange, adunyelwe, nokuyilapho-ke kudingeka umuntu ozomeluleka,” kuchaza uYengwa.
Naye uhambe emazwini kazakwabo uNcikazi ngokuthi konke lokhu kumele kwenzeke ezinkulisa hhayi esigabeni esikhulu.
“Nakuba kudingeka ukuthi inkulisa ibe nesigaba sokufundisa abadlali ngokuziphatha okwenziwa umuntu onguchwepheshe kodwa nabaqeqeshi okuyibona abasuke bephila nabadlali isikhathi esiningi, kufanele bahlonyiswe ngamakhono okwenza lo msebenzi,” kusho uNcikazi.
Uthi ukuhlomisa abaqeqeshi ngaleli khono lokufundisa ngokuziphatha kungaba wusizo olukhulu ngoba kungagxila kubadlali.
“Bheka ukuthi into oyifundiswe nguthisha wakwaGrade R no-1, ihlala iminyaka emqondweni womntwana. Kuze kube yimanje sisasebenzisa izindlela zokubhala nokubamba usiba lokubhala ngendlela esafundiswa ngayo yilabo thisha. Ngokunjalo uma kungase kube ngabaqeqeshi abagxilisa indlela yokuziphatha kubadlali ingasibeka kwelinye izinga.
UMASIBUSANE Zongo okhulele enkulisa yeSuperSport United kodwa udumo lwaba yisithiyo kwinqubekela phambili yakhe Isithombe: BACKPAGEPIX